Dhageyso: Fowsiya Yuusuf oo runta ka sheegtay xaqiiqda DF Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Fowsiya Yuusuf oo runta ka sheegtay xaqiiqda DF Soomaaliya
Dhageyso: Fowsiya Yuusuf oo runta ka sheegtay xaqiiqda DF Soomaaliya
Wasiiradii hore ee Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Marwo Foosiya Yuusuf Xaaji Aadan, ayaa waxay maanta daboolka ka qaaday in Dowladda hadda mataleysa Somaliya, aynaan lahayd wax awood ah,oo ay wax ku qabato.
Waxay qirtay in Soomaalida ay ku dhibaateysan tahay dalalka dunida ku yaala oo idil, isla-markaana aan la soo koobi karin rafaadka ay kala kulmayaan Xabsiyada dalalkaasi ku yaala.
Mudadii ay Xafiiska Shaqada joogtay, ayay sheegtay in uu qorshahoodu ahaa in sanadkaan 2014-ka xoogga la saaro, sidii loo xoojin lahaa Safaaradaha Somaliya ay ku lee dahay Caalamka, si wax loogu qabto kuwa Xabsiyada ku dhibaateysan.
Foosiya Yuusuf waxay sheegtay in dayaca ka jira dalka Kenya uu yimid, markii dalka Kenya uu ku baahay dhibaatada xilligaan ka jirta dalka Somaliya, ayna sababteedu lee dahay in Kenya ay Soomaalida ku soo laba kacleyso.
Ugu dambeen waxay sheegtay in Kenya aysan nabad noqon doonin ilaa ay Somaliya ka xasileyso, dadkeenana ka dhaafi doonin waxa ay ku heyso. Waxayna xalka ku sheegtay Soomaalida oo dib isugu laabato.
Hadalkaan, ayay ka sheegtay Dood Wadaag maanta lagu qabtay Hotel Jaziira ee Magaalada Muqdisho ee dhageyso